(Redirected from Chinwe)
VaFwe vanoti munwee (finger) kureva munwe. VaBemba vanoti cikumo (thumb) vachireva chara.
VaMaconde vanoti chala kana vyala zvawanda (finger) kureva chara. VaNyungwe vanoti cala kana bzala (finger) kureva munwe.
VaWanga vanoti olwala (finger) kureva chara. VaSwahili vanoti kidole (finger) kureva munwe.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Munwe&oldid=79848"
Last edited on 7 Gumiguru 2020, at 13:53
This page was last edited on 7 Gumiguru 2020, at 13:53.